काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक हुन् नारायणकाजी श्रेष्ठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे लगत्तै राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको प्रचण्ड समूहको नेकपा श्रेष्ठकै नेतृत्वमा आन्दोलनमा होमिएको थियो ।
केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठ र सहसंयोजक योगेश भट्टराईले मजदुर संगठनको नेतृत्व गर्ने पुर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । श्रेष्ठ र भट्टराईले नेतृत्व गरेको स्थानबाट नै मुल जुलुस निस्कनु पर्ने थियो । अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालसँगै नेता झलनाथ खनालसहित उक्त जुलुस रत्‍नपार्क-बागबजार-पुतलीसडक-प्रदर्शनीमार्ग-भद्रकाली-एनएसी-विद्युत प्राधिकरण हुँदै सभामा परिणत हुने पुर्वनिर्धारित कार्यतालिका थियो ।
जुलुस अघि बढेर भृकुटीमण्डपस्थित सभाहल छिचोलेर भद्रकाली-सहिदगेट हुँदै रत्‍नपार्क पुगेर आउनु पर्ने थियो । पुर्वनिर्धारित योजना श्रेष्ठ र भट्टराई दुवैले नेतृत्व गरेको जुलुस अघि बढे पनि प्रचण्ड-नेपाल समूहको जुलुस भने सभास्थलबाट एक कदम पनि अघि बढेन । उनीहरु जुलुस छाडेर मञ्‍चमा चढे । तर श्रेष्ठ जुलुस लिएर भद्रकाली पुगिसकेका थिए ।
शीर्ष नेता भृकुटीमण्डपस्थित ‘टि’ आकारमा निर्माण गरेको सभास्थलमा चढेपछि श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाईयो । जुनबेला श्रेष्ठलाई संघर्ष समितिका संयोजकको हैसियतले सभापतित्व आसनग्रहण गर्नु पर्ने थियो । त्यो बेला श्रेष्ठ उपस्थित हुन सकेनन् । न त कार्यक्रम सञ्‍चालक भट्टराई नै मञ्‍चमा थिए ।
पुर्वनिर्धारित रूटअनुसार जुलुस प्रदर्शन नगरेको भन्दै शीर्ष नेतासँग श्रेष्ठ रिसाए । जुन दृष्य मञ्‍चमा स्पष्ट देखिन्थ्यो । उनलाई सुरूमा प्रचण्डले सम्झाउने प्रयास गरे । तर आफूलाई अपमानित गरेको महसुस गरिरहेका श्रेष्ठ कन्भिन्स् हुन सकेनन् । माधव नेपालले पनि प्रयास गरे । तर नेपालसँग ठाडो सवालजवाफ गरे ।
प्रचण्डसँग असहमति जनाएका श्रेष्ठले नेपालसँग आक्रोशपूर्ण सवालजवाफ गरेपछि मञ्‍च व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका युवा संघका संयोजक रामप्रसाद सापकोटाले सम्झाउने प्रयास गरे । श्रेष्ठले उनलाई हुत्याउने कोसिस गरे । त्यसपछि पम्फा भुसाल अगाडि आइन् । सम्झाउने प्रयास गरिन् । तर श्रेष्ठ मानेनन् । त्यति मात्रै होइन, लिलामणी पोखरेलले पनि सम्झाउने प्रयास गरे । तर अपमानित महसुस गरेका श्रेष्ठ चित्त बुझेको देखिएन ।
भुसालले कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिरहिन तर श्रेष्ठ उदास भएर मञ्‍चमा बसिरहे । कतिसम्म देखियो भने, सभापतित्व गरेका श्रेष्ठले समापन मन्तब्य दिनसमेत मानेनन् । अन्ततः कार्यक्रम सञ्‍चालक भुसालले कुरा मिलाएर सभापतिको निर्देशन भन्‍दै सभा समापनको घोषणा गरिन् । "पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमको सेटअनुसार म जुलुस लिएर अगाडि बढिसकेको थिए । तर उहाँहरूले विचैमा सेट चेन्ज गरिदिनु भयो । श्रेष्ठले देखापढीसँग भने-हिजाे विधि र पद्दतिअनुसार चलेन भनेर केपी ओलीसँग लड्याैं । आज उहाँहरूले त्यही कार्य दाेहाेर्‍याएपछि विद्राेह गरेका हुँ ।
योगेशले मञ्‍च छाडेर हिडे
स‌ंघर्ष समितिले तयार कार्यक्रम सेट परिवर्तन भएपछि सहसंयोजक योगेश भट्टराई कार्यक्रम नसकिदै बाहिरिएका थिए । माधवकुमार नेपालले बोलिसकेपछि भट्टराई कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिएका थिए । उनले प्रचण्डको भाषण मञ्‍चमा बसेर सुनेनन् ।
नेपाल बोलिसकेपछि भट्टराई मञ्‍च छाडेर आरआर कलेजतिर जाने प्रयास गरे । तर आरआर कलेजतर्फ जान सम्भवः नभएपछि भट्टराईलाई स्वयंसेवकहरुले विद्युत प्राधिकरणतर्फबाट निस्कन सहज बनाउनु परेको दृश्य आमसभाका सहभागीले देखेका थिए । नेताहरूको गतिविधिले अपमानित भएको अनुभूति गरेपछि भट्टराई मञ्‍चबाट बाहिरिएको उनी निकट एक नेताले बताए ।
वक्ता छनौटमा समस्या
आमसभामा को-को वक्ता हुने भन्‍ने विषयमा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा विबाद सुरूदेखि नै देखा परेको थियो । भीम रावलले नेकपा एमालेको तत्कालिन उपाध्यक्ष भएकाले वरिष्ठताको आधारमा आफुले बोल्न पाउनु पर्ने सर्त राखेका थिए । तर उनको नाम समावेश गराउन नसकेपछि रावल आक्रोशित भएका थिए । आफ्नो सट्टा घनश्याम भुसाललाई वक्ताको रुपमा छनौट गरेपछि रावल कार्यक्रममा नै आएनन् ।
पूर्वमाओवादी समूहबाट वक्ताको रूपमा एकजना मात्र प्रचण्ड हुने तर पूर्वएमालेबाट तीन जना हुने र कार्यक्रम सञ्‍चालन पनि पूर्वएमाले कै नेताले गर्ने भनेपछि विबाद परेको थियो । यो विषयमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालगायतले नेताले आपत्ति जनाएका थिए । पूर्वएमालेबाट तीन जना वक्ता हुने तर पूर्वमाओवादीबाट एकजना मात्रै वक्ता हुने भएपछि यो पार्टीमा माओवादीको के महत्व भयो र ? के पार्टी फेरी पूर्व एमालेको कब्जामा गएको हो ? भन्दै पुन र शर्माले प्रचण्डसँग गुनासो गरेका थिए ।
तर, केन्द्रीय संघर्ष समितिले प्रचण्डलाई मात्रै वक्ता राख्‍ने निर्णय भएको जवाफ दिएपछि पुन र शर्मा काठमाडौं नै फर्केनन । स्रोतले भन्यो- प्रचण्डले पूर्वएमालेलाई महत्व दिएपछि पुन र शर्मासहित अधिकांश पूर्वमाओवादी नेताहरू असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् ।
प्रकाशित: शनिबार, माघ १०, २०७७ १४:०२
पुर्वनिर्धारित योजना श्रेष्ठ र भट्टराई दुवैले नेतृत्व गरेको जुलुस अघि बढे पनि प्रचण्ड-नेपाल समूहको जुलुस भने सभास्थलबाट एक कदम पनि अघि बढेन । उनीहरु जुलुस छाडेर मञ्‍चमा चढे । तर श्रेष्ठ जुलुस लिएर भद्रकाली पुगिसकेका थिए ।
कार्यक्रम सञ्‍चालनको जिम्मेवारी पाएका योगेश भट्टराई कार्यक्रम नसकिदै बाहिरिएका थिए । माधवकुमार नेपालले बोलिसकेपछि भट्टराई कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिएका थिए । उनले प्रचण्डको भाषण मञ्‍चमा बसेर सुनेनन् ।
राजनीति विचार / अन्तर्वार्ता
ओलीले नहारेको 'हार'लाई 'जित'को रूपमा बुझ्‍नु गलत
बुधबार, फागुन १२, २०७७ १३:१९